Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadka KLM kaliya ee la tallaalay: Amsterdam-Singapore
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • Wararka Nederland • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Singapore • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Duulimaadka KLM kaliya ee la tallaalay: Amsterdam-Singapore.
KLM Royal Dutch Airlines waxay bixin doontaa socdaal aan karantiil lahayn iyadoo la qorsheeyay duulimaadyada Tallaalka Lane (VTL) ee Singapore laga bilaabo Amsterdam Isniinta iyo Sabtida kasta.
Laga bilaabo 21ka Oktoobar 2021, Air France waxay ka shaqaysaa laba duulimaad oo toddobaadle ah oo loo qoondeeyey Tallaalka Lane (VTL) oo ka socda Paris ilaa Singapore.
Laga bilaabo 1 Noofambar 2021, KLM waxay ka shaqeysaa laba duulimaad oo toddobaadle ah oo loo qoondeeyay Duullimaadka Tallaalka Tallaalka (VTL) ee Amsterdam ilaa Singapore.
Socotadu waa inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha Lane Travel Travel (VTL).
Laga bilaabo Noofembar 1, 2021 KLM Royal Dutch Airlines waxay bixin doontaa socdaal ka-reebitaan la'aan ah iyada oo la raacayo duulimaadyada Tallaalka Tallaalka (VTL) ee Singapore laga bilaabo Amsterdam Isniinta iyo Sabtida kasta.
Iyada oo loo marayo xarunteeda Amsterdam-Schiphol Airport, KLM waxay geli doontaa shabakaddooda dhammaystiran waxayna bixin doontaa afar duulimaad oo VTL toddobaadle ah oo loo qoondeeyay iyo lix duulimaad oo VTL toddobaadle ah oo aan la cayimin Singapore.
Roland Coppens, Maareeyaha Guud Air France KLM Koonfurta Bari Aasiya iyo Oceania ayaa faallo ka bixiyay: “” Waxaan si buuxda u fahansanahay in dadku rabaan inay safraan oo ay dib ula xiriiraan qoyska iyo saaxiibbada, waana ku faraxsanahay inaan dib u bilowno firaaqada iyo safarka ganacsiga Singapore. Air France iyo KLM waxay abuureen shabakad dhammaystiran oo leh afar duulimaad oo VTL toddobaadle ah oo loo qoondeeyay Singapore, iyo sidoo kale lix duulimaad oo VTL aan la cayimin oo ka kala socda Paris iyo Amsterdam. Iyada oo leh shabakadeena ballaaran ee Air France KLM, waxaan awoodnaa inaan ku xirno dalal badan oo VTL ah iyada oo loo sii marayo xarumaheena labada dhinac ee Paris iyo Amsterdam, oo leh shuruudo tigidh oo dabacsan. ”
Jadwalka duulimaadka KLM ee Amsterdam ilaa Singapore
Jadwalka Lambarka Duulista Maalinta departure imaanshaha Dayuurad
ilaa 31 Oktoobar 2021 KL835/KL837/KL839 Daily 21: 15 15: 45 + 1 B787/B77W
01 Noofambar 2021 illaa 26 Maarso 2022 KL835/KL837/KL839 Tuesday
Raaxo Cusub: Tasmanku wuxuu ku dhawaaqay Australia ugu horeysay
Jasiirada Vulcano ee dalka Talyaaniga ayaa laga daadgureeyay dad ay ku dhinteen...
Colitis Ulcerative Colitis: Daawaynta Bogsiinta Cusub ayaa la keenay...
OMG: Waa la i tallaalay, mana garanayo waxa...
Sandals iyo Goobaha Xeebta ayaa ku Guuleystay 13 Majallad quusitaan oo Cusub...